« Star Tour » Mahajanga: tafaraka ny fialantsasatra sy ny fialamboly ary ny fampisehoana | NewsMada
« Star Tour » Mahajanga: tafaraka ny fialantsasatra sy ny fialamboly ary ny fampisehoana
Par Taratra sur 27/08/2018
Lanonam-pianakaviana, satria, samy nahazo ny anjarany ny rehetra. Nahazo tombony manokana ireo mpankafy an’ireo mpanakanto nalahatra tao anatin’ny « Star Tour » Mahajanga andiany faharoa
Ambohipihaonana i Mahajanga… Tafaraka ireo mpiala sasatra avy amin’ny faritra maro, sy ireo tompon-tany efa niandry ny “Star Tour” andiany faharoa. Vao tolaka ny andro, manomboka mihazo ny « bord » ny fianakaviana, mamonjy ireo fialamboly isan-karazany sy ho an’ny tsirairay.
Nanomboka ny zoma lasa teo kosa, nifantoka bebe kokoa tamin’ny fampisehoana sy fialamboly, ao anatin’ny hetsika « Star Tour » ny rehetra. Taorian’ny fanentanana sy ny lalao izay nanokatra ny fotoana, nanomboka ny andiam-pampisehoana i Jazz MMC. Somary mbola nangatsiatsika ireo mpijery, na dia niezaka nanafana ny sehatra ihany aza ireo mpandihy nanaraka azy.
Niova kosa izany, vantany vao niaka-tsehatra i Stéphanie , nandrasan’ireo mpankafy maro, satria, saika niara-nihira ireo hira nalahatr’ity mpanakanto ity avokoa ny rehetra . Niainga tamin’ireo hira nanamarika ny nanombohany tao anatin’ny laza ka hatraty amin’ireo izay nahazoany ny anaram-boninahitra « mpanakanton’ny taona 2017 », samy natolony ho an’ireo mpankafy tonga nanotrona azy teto Mahajanga avokoa. Anisan’ny tsy nampoizin’ireo mpijery ka nahafaly azy ilay hira « Mampisy appetit », nataon’i Zara, iray amin’ireo misahana ny feo lafika ao amin’ny tarika Stéphanie.
Narevaka ny « carnaval »
Tsikaritra fa nisy andiana tanora maromaro, nifamotoana ary nisalotra akanjo marevaka, manaraka ny lokon’ireo zava-pisotro vokarin’ny Star, ny asabotsy tolakandro.Efa niomana tamin’ny « carnaval » izy ireo. Niainga teny amin’ny « jardin Kaila », nandalo an’i Mahabibo, Tsaramandroso, lapan’ny tanàna, Baobaob Be ary nifarana teo amin’ny sehatra lehibe nanoloana ny « Bord » ny « carnaval » nanjakan’ny loko marevaka. Namonjy ireo mpanao « zumba » ary dia nitohy tamin’ny dihy mirindra niaraha-nientana izany.
Vao nilentika ny masoandro, efa rakotra olona indray ny araben’ny Bord, ny asabotsy. Feno aloha ny “espace Terasse”, nandray ireo fianakaviana niala voly tamin’ny karaoke, sns, nentanin’i Andry Barhone.
Efa tsy nisy nivezivezena intsony koa nanoloana ny sehatra lehibe, satria nahasarika mpijery maro i Elidiot. Ankoatra ny soradihy izay nampitolagaga ny mpijery, nataon’ity mpanakanto ity avokoa ireo hira izay nandrasan’ny mpankafy. Taorian’ny ora vitsivitsy niarahana, tsy mbola nisaraka ny rehetra fa nitohy tamin’ny alim-pandihizana lehibe ny fotoana.